Home > သတင်းလွှာ ၁/၂၀၁၄
မြန်မာနိုင်ငံတိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်များအသင်း အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ (၂၀၁၃-၂၀၁၅ ခုနှစ်)မှ အသင်းဝင်များအားလုံး ကာယသုခ၊ စိတ္တသုခနှစ်ဖြာ ပြည့်စုံပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါသည်။
အသင်းကြီး၏ (၁၂) ကြိမ်မြောက် ညီလာခံ (၂၀၁၃ မတ်လ ၃၀-၃၁ ရက်) မှ ရွေးချယ်ခဲ့သော ၂၀၁၃ - ၂၀၁၅ ခုနှစ် အလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ သည် အဖွဲ့ဝင် (၁၅) ဦး ဖြင့် အောက်ပါလုပ်ငန်းများကို လစဉ်အစည်းအဝေးများ ကျင်းပပြုလုပ်ပြီး ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။
၁။ ၂၃-၄-၂၀၁၃ နေ့တွင် World Veterinary Day အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနှင့် တောင်ကြီးမြို့တို့တွင် ဟောပြောပွဲများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါ သည်။ ရန်ကုန်မြို့၊ မန္တလေးမြို့၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ပြည်မြို့၊ မော်လမြိုင်မြို့နှင့် အခြားမြို့များတွင် ခွေးရူးရောဂါကာကွယ်ဆေးများကို အခမဲ့ထိုးနှံပေးခဲ့ကြပါသည်။
၂။ ၁၄-၇-၂၀၁၃ တွင် စဉ်ဆက်မပြတ် ပညာရေး၊ ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ပထမအကြိမ် စဉ်ဆက်မပြတ် ပညာရေး Continuing Education (CE) အစီအစဉ်အရ Recent Advances in Veterinary Practice No. (1) ပွဲကို ရန်ကုန်မြို့၊ သီရိအဏ္ဏ၀ါခန်းမတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ (အသင်း၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာတင်တင်မြိုင်၊ ဟောင်ကောင်မြို့ မှ ဒေါက်တာတင့်နိုင်နှင့် ဒေါက်တာ ငယ်ငယ်ခင်တို့က ဟောပြောခဲ့ကြပါသည်။)
၃။ ၂၈-၉-၂၀၁၃ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သည့် World Rabies Day အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ရန်ကုန်မြို့၊ မန္တလေး မြို့ နှင့် တောင်ကြီးမြို့တို့တွင် ဟောပြောပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
၄။ ၂၇-၇-၂၀၁၃ မှ ၂၉-၇-၂၀၁၃ အထိ အသင်းဝင်အင်အား မြှင့်တင်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် နေပြည်တော်၊ မန္တလေးမြို့နှင့် တောင်ကြီးမြို့များသို့ စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းများကို ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အသင်းဝင်ကတ်ပြားများကိုလည်း ရိုးရိုး ကတ်ပြားမှ Smart Card PVC (RFID) သို့ ပြောင်းလဲ ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။
၅။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံတိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်များအသင်း ဥက္ကဋ္ဌက ရန်ကုန်မြို့ ၌လည်းကောင်း၊ သြဂုတ်လ ၂၀၁၃ တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ Chula Longkorn University ၌လည်းကောင်း သင်တန်းများပို့ချခဲ့ပါသည်။
၆။ စက်တင်ဘာလ ၁၂ - ၁၄ နေ့ ၂၀၁၃ တွင် ILDEX MYANMAR 2013 တွင် ပြခန်းဖွင့်လှစ်၍ အသင်းဝင်ခွင့် လက်ခံဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အသင်းဝင်များ၏ အခွင့်အလမ်းများကို အသိပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
၇။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်နေ့တွင် စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် ကျင်းပသည့် FAVA ၏ ၃၅ ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေး ကို မြန်မာနိုင်ငံတိရစ္ဆာန်ဆေးကု ဆရာဝန်များ အသင်း ဥက္ကဋ္ဌ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
၈။ ၂-၂-၂၀၁၄ နှင့် ၃-၂-၂၀၁၄ ရက်တို့တွင် အသင်းကြီး၏ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစာတမ်းဖတ်ပွဲနှင့် နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးကို ရန်ကုန်မြို့၊ မြန်မာကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ မွေးမြူရေးနှင့်ဆိုင်သော ပြခန်းများ ပြသခြင်း၊ နိုင်ငံတကာမှ ပညာရှင်များက စာတမ်း ဖတ်ကြားခြင်း၊ နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် သက်ကြီးဆရာကြီး၊ ဆရာမကြီးများအား ပူဇော်ကန်တော့ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။
၉။ မြန်မာနိုင်ငံတိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်များအသင်း၊ မွေး-ဆေးတက္ကသိုလ် နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ ဟိုကိုင်းဒိုး တက္ကသိုလ်တို့ ပူးပေါင်း၍ "Detection and genetic analysis of blood parasities in dogs in Myanmar" ခေါင်းစဉ်ဖြင့် သုတေသနလုပ်ငန်းကိုလည်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
၁၀။ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်များအသင်း၏ အသင်းဝင်များ အင်အားမြှင့်တင်နိုင်ရန် မူလကန့်သတ်ထားသော စည်းမျဉ်း၊စည်းကမ်းအချို့ကို အသင်းဝင်များ၏ အကြံပြုချက်များအရ ဖြေလျှော့ပေးခဲ့ပါသည်။
၁၁။ ယနေ့အချိန်တွင် အသင်းဝင် စုစုပေါင်း (၇၀၇) ဦး ဖြစ်ပါသည်။ ရာသက်ပန် အသင်းဝင် (၅၈၉) ဦးနှင့် ၂၀၁၃-၂၀၁၅ ခုနှစ် အသင်းဝင် (၁၁၈)ဦး ဖြစ်ပါသည်။
၁၂။ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်များအသင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော ဆွေးနွေးပွဲ၊ ဟောပြောပွဲများကို ရေဒီယိုနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားတို့မှလည်း ထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့ပါသည်။
၁၃။ နိုင်ငံခြားသို့ တရားမ၀င်တင်ပို့မည့် တိရစ္ဆာန်များကို တားမြစ်၍ Small Animal Shelter ထူထောင်နိုင်ရန်လည်း ကူညီဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိပါသည်။
၁၄။ ဘွဲ့ရကျောင်းသား/သူများအတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများကိုလည်း လမ်းညွှန်ပြသခဲ့ပါသည်။
၁၅။ မြန်မာနိုင်ငံတိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်များအသင်း ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် FAO မှ Project Formulator Dr. Murray Macclean နှင့် International M&E Consultant, Mr. Bernard Broughton တို့နှင့် တွေ့ဆုံပြီး "Improve Farmers Livelihoods through Animal Health and Production services proposal reformulation" အတွက် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
၁၆။ မြန်မာနိုင်ငံတိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်များအသင်းနှင့် အမေရိကန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီ (USAID) တို့ ပူးပေါင်း၍ ကြက်ငှက် တုပ်ကွေးရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးပညာပေးအစီအစဉ် PREVENT MYANMAR Project ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလမှစတင်၍ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ (၅) မြို့နယ် (ပြင်ဦးလွင်၊ အမရပူရ၊ စဉ့်ကိုင်၊ မတ္တရာနှင့် ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်) တို့တွင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
၁၇။ မြန်မာနိုင်ငံတိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်များအသင်းနှင့် World Small Animal Veterinary Association တို့ ပူးပေါင်း၍ Recent Advances In Veterinary Practice No. (2) "Medicine Essentials For Small Animal Practice" ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇ - ၁၈ တွင် ရန်ကုန်မြို့ Summit Parkview Hotel ခန်းမ တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ Dr. Jill Maddison နှင့် Dr. David Church တို့က ဟောပြောပို့ချခဲ့ကြပါသည်။
၁၈။ မြန်မာနိုင်ငံတိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်များအသင်း ဥက္ကဋ္ဌသည် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ ဟိုချီမင်းမြို့တွင်ကျင်းပသော အာရှတိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်များ အသင်းအဖွဲ့ချုပ် အစည်းအဝေး FAVA/ AOVG သို့ ၂၀၁၄ ခုနှစ် မတ်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင် တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
၁၉။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သည့် World Veterinary Day အထိမ်းအမှတ် ပညာရပ်ဆိုင်ရာဟာပြောပွဲများကို မြန်မာနိုင်ငံ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်များအသင်း (ဗဟို)မှ စီစဉ်ပြီး ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးမြို့တို့တွင်Animal Welfare ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဟောပြောဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
၂၀။ မြန်မာနိုင်ငံတိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်များအသင်း ဥက္ကဋ္ဌသည် မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ကုလသမဂ္ဂ စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့ (FAO) တို့ ပူးပေါင်းကျင်းပသည့် "Inception Wookshop on TCP/MYA/3502 support for Animal Feeding Strategies Improved Livestock Production of Myanmar" သို့ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
၂၁။ စဉ်ဆက်မပြတ် ပညာရေးအစီအစဉ်အဖြစ် တတိယအကြိမ် ဟောပြောပွဲ Recent Advances In Veterinary Practice No. (3) ကို ၅-၇-၂၀၁၄ နေ့တွင် စင်္ကာပူနိုင်ငံမှ Dr. Sing Kong Yuen က ရန်ကုန်မြို့၊ သီရိအဏ္ဏ၀ါခန်းမတွင် ဟောပြောပို့ချခဲ့ပါသည်။
၂၂။ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ Jeju National University နှင့်လည်း ပညာရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်များ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
၂၃။ မြန်မာနိုင်ငံတိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်များအသင်းကြီး၏ (၁၃) ကြိမ်မြောက်ညီလာခံကြီးကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် ကျင်းပပြုလုပ် မည်ဖြစ်ပြီး ထိုညီလာခံမှ အလုပ်အမှုဆောင်အသစ်များကို ရွေးချယ်တင်မြှောက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေး
မြန်မာနိုင်ငံတိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်များအသင်း၏ ၂၀၁၄ ခုနှစ် စာတမ်းဖတ်ပွဲနှင့် နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးကို မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးမြို့၊ မြို့တော်ခန်းမတွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၇ ရက် (စနေနေ့) နှင့် ၂၈ ရက် (တနင်္ဂနွေနေ့) တို့၌ ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည်။
နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးတွင် ပါဝင်ကျဖြစ်သည့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ စာတမ်းဖတ်ပွဲ၊ မွေးမြူရေးအစာ၊ ဆေးဝါးနှင့် လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ တင်သွင်း၊ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးသည့် ကုမ္ပဏီများမှ ပြခန်းများ၊ သက်ကြီးပူဇော်ပွဲနှင့် ညစာစားပွဲတို့ ပါဝင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ် နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေး ကျင်းပရာတွင် မန္တလေးမြို့ ၌ ဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲ ထည့်သွင်းကျင်းပပါမည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ် နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေး တက်ရောက်ရန် မှတ်ပုံတင်ကြေးကို ကျပ် ၁၀,၀၀၀/- (ကျပ်တစ်သောင်းတိတိ) နှင့် ညစာစားပွဲ လက်မှတ်ကို ကျပ် ၁၀,၀၀၀/- (ကျပ်တစ်သောင်းတိတိ) သတ်မှတ်ထားပါသည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ် နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးသို့ အသင်းဝင်များ အင်တိုက်အားတိုက် တက်ရောက်ကြမည်ဟု အလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့က မျှော်လင့်ပါသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက် နောက်ဆုံးထားပြီး မှတ်ပုံတင်ကြပါရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။ ညစာ စားပွဲတက်ရောက်ရန် ကြိုတင်စာရင်း ပေးသွင်းထားနိုင်ပြီး လက်မှတ်ကို နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးရက်တွင် ၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ညစာစားပွဲကို ၂၇-၁၂-၂၀၁၄ ရက် ညနေပိုင်းတွင် မန္တလေးမြို့ ORIENTAL HOUSE တွင် ပြုလုပ်ပါမည်။
၂၀၁၄ ခု နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက် နောက်ဆုံးထား၍
အောက်ဖော်ပြပါ အီးမေးလ်များသို့ပေးပို့ပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။